Aesthetic Lasers, Runako Machina, Medical Laser Devices - Mutengesi
Cryolipolysis uremu kurasikirwa muchina
EMSlim Muviri Sculpt muchina
Yakareba kupuruzira 1064nm Nd Yag laser Machine
Multifunction Runako Machine
Q Yakachinja Nd Yag Laser Machine
RF Kusimudza Machine
Kugamuchirwa kuKR LASER
KR LASER inozvipira kupa imwe-stop mhinduro pane zvekurapa runako rweSalon, Chipatara, Makiriniki vatengi. Tine 808nm Diode Laser Kubvisa Bvudzi Machina, Coolsculpting Machina, HIFU Machina, 980nm diode laser spider veins ekubvisa michina, Intense Pulsed Chiedza (IPL) michina yako.
Tine yedu pachedu Dhipatimendi Rekutsvagisa & Development, iyo Yechidiki bhizinesi timu ine hunyanzvi hwepamusoro, vatengesi vekunze uye dhipatimendi rekutengesa-shure.
Pane nguva dzose mhinduro yedambudziko rako!
Kubvisa BvudziSravana Sameeralu Serial 4th Hot
Iyo Picosecond Laser Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yeChoasma, Zera nzvimbo, Nevus ...
Q Yakachinja ND YAG Tattoo Removal Laser Machine
Iyo Q Yakachinja ND YAG Tattoo Removal Laser Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yeRem...
Kurapa Theory Kutora kuputika kwechiedza, Super Picosecond Laser&......
1200W Diode kubvisa bvudzi laser Machine
Iyo 1200W Diode Kubvisa Bvudzi Laser Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yePermanent h ...
Diode kubvisa bvudzi laser Machine
Kurapa Theory Diode laser midziyo inotora 808 nm, 755nm uye 1064nm, kunyanya ......
Matatu mune Imwe Multifunction Machine
Kurapa Theory SHR: SHR kana Super Kubvisa Bvudzi iteknoloji ichangoburwa......
Kurapa Theory Multifunctional Workstation ndeye yakazara uye inoshanda yekutarisira kwechiso ......
Iyo Co2 Fractional Laser Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yeGanda rekuvandudza uye res...
Iyo 6D Cryolipo Laser Shape System (Nov-invasive 6D Laser Slimming Equipment) ine hutano, inovimbika ...
High Intensity Electromagnetic Muscle body kuveza mafuta ari kupisa tsandanyama muchina wekuvaka
Kurapa Theory Coolsculpting & Muscle Training CoolSculpting isiri-invas......
Inotakurika 7D HIFU Yakatarisana neUltrasound Machine
Iyo Inotakurika 7D HIFU Yakatarisana neUltrasound Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yechiso ...
980nm Kuvhiya Diode Laser Machine
Iyo 980nm Kuvhiya Diode Laser Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yeVascular lesion ...
Iyo Super Picosecond Nd YAG Laser Machine ine hutano, yakavimbika runako mhinduro yeBvisa zvese k...
Isu tiripo kuti tikubatsire kuburikidza nedanho rega rega rekukura maitiro ako.
Isu tinopa OEM & ODM, kudzidziswa, tsigiro yehunyanzvi, uye inopa yakazara yakazara masevhisi ekugadzirisa.
Factory yakananga. Best mutengo rutsigiro mutemo uchaita kuti iwe uwedzere kusimba.
24/7 Tekinoroji yekutsigira timu ichave yakagadzirira nenguva kuti ikugadzirire mhinduro dzekurapa dzakakwana.
Isu tinogara tichitarisira kudyidzana kwebhizinesi nevamiriri pasi rese. Isu tinokukoka nemoyo wese kuti uve mumwe wenhengo dzedu muKR LASER Mhuri.
Ini ndinotsvaga kuti murwere wega wega arapwe nekutarisirwa kwemhando yepamusoro, uye kuti kurapwa kwega kwega kuite kutaridzika kwakanaka, kwepanyama. Iyo KR laser ndiyo yakakwana sisitimu yekubvisa ma tattoos asingadiwe kubva kumarudzi ese eganda ane kuchengetedzwa kwepamusoro uye kushanda nesimba.
Ndanga ndichipa kubvisa tattoo kwechinguva ikozvino neQ-switched Nd: YAG system, asi ndakaona kuwedzera kwevarwere vane mavara ane mavara. Ini ndaida kuona kuti varwere vangu vapihwa zvakanakisa mhedzisiro, zvisinei neinki mavara avakaratidza, ndosaka ndakasarudza kuwedzera iyo KR laser pane yangu tsika. Takaona mhinduro dzinoshamisa pamaingi erecalcitrant.
Chinangwa chedu ndechekuita marapirwo anoburitsa mhedzisiro yepamusoro kune vese varwere vedu. Iyo KR Laser yakabatsira vazhinji vevarwere vedu kuona zvinokatyamadza mhedzisiro, uye isu tinofara zvikuru kuti takasarudza iyi yekucheka tekinoroji kune ese edu ekubvisa tattoo marapirwo.
KR LASER yakavambwa muna 2008. Kambani iyi iri muBeijing, China. Iyo inokurumidza kukura nyanzvi inogadzira. Isu tinonyanya kutarisa nezve dhizaini uye kugadzira yekurapa laser runako michina.
Copyright © 2008-2022, Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.
Iyi webhusaiti inoshandisa Cookies kuvandudza yako yekubhurawuza ruzivo uye kubatsira nekushambadzira kwedu.
Unogona kuverenga zvakawanda nezve kubvisa Cookies pano: Yakavanzika Policy
Ndinobvumirana nemutemo wekuvanzika uyu
Wana Instant Quote
Zvinhu zvakamakwa ne* zvinodiwa
Ehe, zviri nani kuzadza izvi, zvinodiwa. Ehe, zviri nani kuzadza izvi, zvinodiwa. Ehe, zviri nani kuzadza izvi, zvinodiwa.
Ehe, zviri nani kuzadza izvi, zvinodiwa.